ညဘကျ အခြိနျမှနျမအိပျသူမြား တှကွေုံ့ရမညျ့ ကနျြးမာရေး ဆိုးကြိုးမြား – Daily Feed MM
အိပျယာဝငျခြိနျ နောကျကတြာက တကယျကို မကောငျးပါဘူး။ လူတဈယောကျရဲ့ အသားအရလှေပမှု၊ ခန်တာကိုယျပွညျ့ဖွိုးမှု၊ အရပျရှညျမှု၊ စိတျကွညျလငျမှု စတဲ့ အရာမြားစှာဟာ ကိုယျ့ရဲ့အိပျခြိနျနဲ့ အဓိကသကျဆိုငျပါတယျ။ ပျခြိနျ အနညျးဆုံး ၇ နာရီ ရှိမှသာ
အနညျးဆုံး ၇ နာရီ ရှိမှသာ ကနျြးမာရေးအတှကျ သာမက အလှအပအတှကျပါ အကြိုးရှိမှာပါ။ဒီနရောမှာသိထားဖို့က အိပျခြိနျ ၇ နာရီပွညျ့ဖို့ဆိုပွီး ည ၁ နာရီအိပျ၊ မနကျ ၈ နာရီ ထရငျ အလကားပါပဲ။ အိပျခြိနျတဈခုတညျး အရေးပါတာ မဟုတျပါဘူး။ အိပျယာဝငျ
ခြိနျဟာလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ည ၁၁ နာရီအိပျ၊ မနကျ ၆ နာရီ၊ ၇ နာရီလောကျ ထတာဟာသငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးပါ။ဒါဆိုည ၁၁ နာရီနောကျပိုငျးမှ အမွဲအိပျတဲ့အခါ ဘာတှဖွေဈလာမလဲ။
1. မကျြတှငျးကပြွီး မကျြလုံးအနားတဈဝိုကျ ညိုမညျးစပေါတယျ။2. အသားအရေ ပကျြစီးလှယျပါတယျ။3. အသားအရမေကောငျးလာတဲ့အခါ အလှပွငျရခကျလာပါတယျ။4. အရပျရှညျဖို့ နှောငျ့နှေးစပေါတယျ။
5. ခန်တာကိုယျဟာ gym ဆော့လညျး လိုသလို body ရမလာနိုငျပါဘူး။ဒါက အလှအပအတှကျပဲရှိသေးတာ။ တကယျက1. နှလုံးအားနညျးလာမယျ။2. အစာအိမျရဲ့ အစာခွဖေကျြစနဈ ယိုယှငျးလာမယျ။
3. အမောဖောကျလာမယျ။4. သှေးခုနျနှုနျး မူမမှနျတာတှေ ဖွဈလာမယျ။
5. ဦးနှောကျသှေးကွောပွတျဖို့ နီးစပျလာမယျ။6. ကိုယျတှငျးကလီစာတှေ အလုပျလုပျနိုငျစှမျးမရှိတော့ဘူး။7. ကြောကျကပျနဲ့ အသညျးလညျး အားနညျးလာမယျ။8. Immune system ကသြှားမယျ။ ဖြားနာလှယျမယျ။
အဲ့တော့ အိပျရေး ဝ ဖို့လိုတဲ့အပွငျ အိပျခြိနျမှနျဖို့လညျး လိုပါတယျဗြ။ အိပျရေးလညျးမဝ၊ အိပျခြိနျလညျးမမှနျလို့ကတော့ ရုပျဆိုးပနျးဆိုးနဲ့ ရောဂါရလာလိမျ့မယျသာ မှတျ။ဆိုတော့ကာ အိပျပါ။ ဒီနကေ့စပွီး ည ၁၁ နာရီဆိုတာနဲ့ အိပျယာထဲ ဝငျကွညျ့ပါ။ မအိပျခငျ
ခဏလေးပါပဲဆိုပွီး phone မကိုငျဖို့မှာပါရစေ။ ခဏလေးကနေ ညသနျးခေါငျအထိ phone မခနြိုငျဘဲ ဖွဈနမှောစိုးလို့။ ၁၁ နာရီ ဆိုတာနဲ့ phone ကိုရပျ၊ အကုနျလကျစသတျပွီး အိပျပါ။
AD – Secret Diary
အိပ်ယာဝင်ချိန် နောက်ကျတာက တကယ်ကို မကောင်းပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလှပမှု၊ ခန္တာကိုယ်ပြည့်ဖြိုးမှု၊ အရပ်ရှည်မှု၊ စိတ်ကြည်လင်မှု စတဲ့ အရာများစွာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ချိန်နဲ့ အဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။ ပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ရှိမှသာ
အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ရှိမှသာ ကျန်းမာရေးအတွက် သာမက အလှအပအတွက်ပါ အကျိုးရှိမှာပါ။ဒီနေရာမှာသိထားဖို့က အိပ်ချိန် ၇ နာရီပြည့်ဖို့ဆိုပြီး ည ၁ နာရီအိပ်၊ မနက် ၈ နာရီ ထရင် အလကားပါပဲ။ အိပ်ချိန်တစ်ခုတည်း အရေးပါတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ယာဝင်
ချိန်ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ည ၁၁ နာရီအိပ်၊ မနက် ၆ နာရီ၊ ၇ နာရီလောက် ထတာဟာသင့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါ။ဒါဆိုည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှ အမြဲအိပ်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။
1. မျက်တွင်းကျပြီး မျက်လုံးအနားတစ်ဝိုက် ညိုမည်းစေပါတယ်။2. အသားအရေ ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။3. အသားအရေမကောင်းလာတဲ့အခါ အလှပြင်ရခက်လာပါတယ်။4. အရပ်ရှည်ဖို့ နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
5. ခန္တာကိုယ်ဟာ gym ဆော့လည်း လိုသလို body ရမလာနိုင်ပါဘူး။ဒါက အလှအပအတွက်ပဲရှိသေးတာ။ တကယ်က1. နှလုံးအားနည်းလာမယ်။2. အစာအိမ်ရဲ့ အစာခြေဖျက်စနစ် ယိုယွင်းလာမယ်။
3. အမောဖောက်လာမယ်။4. သွေးခုန်နှုန်း မူမမှန်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
5. ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ဖို့ နီးစပ်လာမယ်။6. ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။7. ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းလည်း အားနည်းလာမယ်။8. Immune system ကျသွားမယ်။ ဖျားနာလွယ်မယ်။
အဲ့တော့ အိပ်ရေး ဝ ဖို့လိုတဲ့အပြင် အိပ်ချိန်မှန်ဖို့လည်း လိုပါတယ်ဗျ။ အိပ်ရေးလည်းမဝ၊ အိပ်ချိန်လည်းမမှန်လို့ကတော့ ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးနဲ့ ရောဂါရလာလိမ့်မယ်သာ မှတ်။ဆိုတော့ကာ အိပ်ပါ။ ဒီနေ့ကစပြီး ည ၁၁ နာရီဆိုတာနဲ့ အိပ်ယာထဲ ဝင်ကြည့်ပါ။ မအိပ်ခင်
ခဏလေးပါပဲဆိုပြီး phone မကိုင်ဖို့မှာပါရစေ။ ခဏလေးကနေ ညသန်းခေါင်အထိ phone မချနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့။ ၁၁ နာရီ ဆိုတာနဲ့ phone ကိုရပ်၊ အကုန်လက်စသတ်ပြီး အိပ်ပါ။
ဆီးခြိုရှိသူပါ သုံးနိုငျပွီး ကိုယျတိုငျဖျောစပျနိုငျတဲ့ ဆငျတုံးမနှယျ အဆီခဆြေးပေါငျး လုပျနညျး